Ity no sary navoakan'ny LG G6 | Vaovao momba ny gadget
Ny sarin'ny LG G6 dia voasivana alohan'ny hanombohany ny 26 febroary
Tianay ho fantatra raha hitondra terminal farany avo lenta antsika ity LG ity manana ny zava-drehetra inona no tadiavina amin'izao fotoana izao ary atsaharo ny fanandramana toy ny modularity, izay, amin'ny lafiny iray, mahaliana talohan'ity fironana mety hiseho ity izay misy marika samihafa miresaka momba ny modules, fa tamin'ny farany dia nanomboka ny mety ho iray amin'ireo tsara indrindra telefaona amin'ny taona.
Ankehitriny dia manana izay mety ho sary voalohany an'ny LG G6 isika (aorian'ireny ihany avy omaly), ary amin'ny zavatra toa lavitra ny famolavolana izay nananan'ny LG G5. Ny fitaovana dia miavaka amin'ny alim-baravarana alimina sy zoro beveled, ary koa eo anoloana izay mety tsy hanana zana-kazo satria kely dia kely izy ireo. Toa an'i Miomix an'i Xiaomi, ity telefaona ity dia te hisarika ny sain'ny mpampiasa amin'ny fampisehoana zoro boribory sy a mahatalanjona ny tahan'ny efijery amin'ny vatana.
El fanovana endrika Azo takarina ny manavaka azy amin'ny LG G5 sy ny toetrany maodely kokoa, na dia tsy maintsy hamafisina aza izany, satria sarotra ny mieritreritra fanovana lehibe toy izany manomboka amin'ny herintaona ka hatramin'ny manaraka, raha kely fotsiny izany matetika tsikelikely. Mazava ho azy, manantena izahay fa, satria afaka miresaka zavatra hafa amin'ny sainam-pirenena LG amin'ity taona 2017 ity isika.
Ny LG G6 dia afaka manamarika ho avy mahaliana ho an'ny orinasa koreana izay nieritreritra asehoy amin'ny 26 feb fa tsy ny datin'ny 11 martsa. Noho izany dia ho herinandro vitsivitsy vao eo am-pelatanantsika LG G6 mampanantena araka ity sary ity.
Raha LG no fantatra araraoty ny volana fa hanana fotoana ianao Alohan'ny hamoahana ny Galaxy S8 an'ny Samsung dia afaka manomboka ny taona amin'ny varotra mahaliana izy raha tsy diso fanantenana amin'ireo singa ao aminy. LG G6 izay hampiavaka an'i Google Assistant.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Ny sarin'ny LG G6 dia voasivana alohan'ny hanombohany ny 26 febroary
Nokia hanolotra takelaka 18.4-inch ao amin'ny MWC
Ireo Chromebook rehetra navoaka tamin'ity taona ity dia hanana fidirana amin'ny Google Play